people Nepal » उपेन्द्र यादवको नयाँ मागः मधेसमा स्थानीय तह र मतदाता थपौं उपेन्द्र यादवको नयाँ मागः मधेसमा स्थानीय तह र मतदाता थपौं – people Nepal
१९ चैत, काठमाडौं । जब सरकार र मधेसी मोर्चावीच सहमति हुनै लाग्छ, मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले कुनै न कुनै नयाँ माग तेर्स्याउने गरेका छन् । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चावीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पुनः उपेन्द्र यादवले दुईवटा नयाँ माग अघि सारे, जसले गर्दा लिखित सहमति हुन सकेन ।
सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चालाई थप आश्वस्त बनाउनका लागि संविधानको धारा २७४ तत्काल संशोधन गर्ने सहमति पनि कार्यदलमा सत्तापक्षका नेताहरुले जनाएका थिए ।
शुक्रबारको बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले भनेका छन्- ‘अब संविधान पनि संशोधन हुनेभयो र मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भयो । अब चुनावको वातावरण बन्यो ।’
अनेकौं मागहरु राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका यादवले भने- ‘सरकारसँग मोर्चाको कुनै सहमति भएको छैन, सरकारले अल्मल्याउन खोजिरहेको छ, अब हामी भोलिदेखि आन्दोलनमा जान्छौं ।’
सहमति हुनै लाग्दा दुईवटा नयाँ माग राखेर उपेन्द्र यादवले किन लिखित सहमति हुन दिएनन् ? के उपेन्द्र यादव चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा छन् ? यसबारे प्रश्न गर्दा सत्तापक्षका एकजना नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने- ‘शुक्रबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव पनि नरम देखिएका थिए, उनले पनि मिलाएर चुनावमा जाऔं भनेका छन् । तर, उनी सरकारसँग लिखित समझदारी नगरिकनै सरकारको विरोध गरेर आन्दोलनको बलबाट चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन् । यही कारणले उनी लिखित सहमति गर्नेपक्षमा छैनन् ।’
सरकारले मधेसी मोर्चासँग लिखित सहमति नगरिकनै संविधान संशोधन गरोस् भन्ने उपेन्द्र यादवको चाहना रहेको विश्लेषण छ । र, यादवको यही लाइनमा राजेन्द्र महतो लगायत मोर्चाकाहरु नेताहरु पनि एक छन् ।